Musical.ly လိုမျိုး Lip Sync Live Feature ကို ထည့်သွင်းတော့မယ့် Facebook
8 Jun 2018 . 5:58 PM
Facebook မှာ သီချင်းစာသားအတိုင်း ပါးစပ်က လိုက်ပြီးဆိုတဲ့ Lip Sync Video တွေတက်လာတာကိုတွေ့ဖူးကြမှာပါ။ အဲ့ဒီ Video တွေက Application တွေကို အသုံးပြုလုပ်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ Facebook ပေါ်မှာတင် အသုံးပြုလို့မရခဲ့ပါဘူး။
အခုလိုမျိုး Lip Sync Video တွေပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် နာမည်ကြီးတာက Musical.ly App က လက်ရှိမှာ နာမည်ကြီးနေပြီးတော့ အဆိုပါ App နဲ့ပဲ အတော်များများဖန်တီးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ Facebook က အခုလိုမျိုး အသုံးပြုသူတွေက Lip Sync App တွေကို အသုံးပြုလာတာများပြားလာတဲ့အတွက် Lip Sync Live ဆိုတဲ့ Feature တစ်ခုကို ထည့်သွင်းလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခု Feature ဟာဆိုရင် ပုံမှန် Live လွှင့်နေသလိုပဲ ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ အဆိုပါ Live Feature မှာ Sticker တွေနေရာမှာ ကိုယ်နှစ်သက်ရာသီချင်းတွေကို ထည့်သွင်းနိုင်မှာပါ။ လောလောဆယ်မှာတော့ Camila Cabello ရဲ့ “Havana” ၊ Drake ရဲ့ “God’s Plan” စတဲ့သီချင်းတွေကို အသုံးပြုလို့ရနေပြီလို့ သိရပါတယ်။
အခုလိုမျိုး Facebook က အခုလို Music Lip Sync Service တွေကို ပြုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာက Facebook က လက်ရှိအချိန်မှာ Major Music Labels တွေ ၃ ခုနဲ့ စာချူပ် ချူပ်ဆိုခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အခု Facebook Lip Sync Live Feature ကို သုံးပြီးကြပြီလား?
Facebook မှာ သီခငျြးစာသားအတိုငျး ပါးစပျက လိုကျပွီးဆိုတဲ့ Lip Sync Video တှတေကျလာတာကိုတှဖေူ့းကွမှာပါ။ အဲ့ဒီ Video တှကေ Application တှကေို အသုံးပွုလုပျရတာဖွဈပွီးတော့ Facebook ပျေါမှာတငျ အသုံးပွုလို့မရခဲ့ပါဘူး။
အခုလိုမြိုး Lip Sync Video တှပွေုလုပျခငျြတယျဆိုရငျ နာမညျကွီးတာက Musical.ly App က လကျရှိမှာ နာမညျကွီးနပွေီးတော့ အဆိုပါ App နဲ့ပဲ အတျောမြားမြားဖနျတီးနကွေတာဖွဈပါတယျ။
အခုအခြိနျမှာတော့ Facebook က အခုလိုမြိုး အသုံးပွုသူတှကေ Lip Sync App တှကေို အသုံးပွုလာတာမြားပွားလာတဲ့အတှကျ Lip Sync Live ဆိုတဲ့ Feature တဈခုကို ထညျ့သှငျးလာပွီပဲဖွဈပါတယျ။ အခု Feature ဟာဆိုရငျ ပုံမှနျ Live လှငျ့နသေလိုပဲ ပွုလုပျမှာဖွဈပွီးတော့ အဆိုပါ Live Feature မှာ Sticker တှနေရောမှာ ကိုယျနှဈသကျရာသီခငျြးတှကေို ထညျ့သှငျးနိုငျမှာပါ။ လောလောဆယျမှာတော့ Camila Cabello ရဲ့ “Havana” ၊ Drake ရဲ့ “God’s Plan” စတဲ့သီခငျြးတှကေို အသုံးပွုလို့ရနပွေီလို့ သိရပါတယျ။
အခုလိုမြိုး Facebook က အခုလို Music Lip Sync Service တှကေို ပွုလုပျနိုငျတယျဆိုတာက Facebook က လကျရှိအခြိနျမှာ Major Music Labels တှေ ၃ ခုနဲ့ စာခြူပျ ခြူပျဆိုခဲ့တာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။
အခု Facebook Lip Sync Live Feature ကို သုံးပွီးကွပွီလား?